Baan Ny Kaopy Fisakafoanana Hariva - Famolavolana
Ny Kaopy Fisakafoanana Hariva
Ny Kaopy Fisakafoanana Hariva "baan" dia karazana kaopy iray izay natao manokana ho an'ny fampiasana sakafo hariva. Ny endrika sy ny tanjany tsy manam-paharoa no fitantarana izay mifandraika amin'ny fiasa. Betsaka ny mampiavaka ireo rafitry ny kabinetra. Ny fiasa rehetra sy ny endri-pisotron'ny kaopy fisarahana amin'ny tantara toy ny tsipika Cutlery ary ny boaty misy tarehimarika dia asehon'ny afom-basy sy tsilo. Fanampin'izany, ny fitaratra divay dia asehon'ny chandelier sy ny lovia lovia dia tandindon'ny tohatra. Misy singa efatra lehibe amin'ny trano izay anaovana hevitra.
Anaran'ny tetikasa : Baan, Anaran'ny mpamorona : Mr. Paitoon Keatkeereerut, Mr.Chawin Hanjing, Anaran'ny mpanjifa : Partly Cloudy Studio.
Ny Kaopy Fisakafoanana Hariva Mr. Paitoon Keatkeereerut, Mr.Chawin Hanjing Baan